I-Metal Keypad efakwe ku-Self-service Kiosk eDenmark-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
I-Metal Keypad efakwe ku-Self-service Kiosk eDenmark
Isikhathi: 2020-06-05 Hits: 16
Ama-kiosks okuzenzela uchungechunge lwamadivaysi okokugcina anokunikeza izinsizakalo zosuku lonke futhi kulula ukusebenza kuwo futhi alula.Lenza iningi labasebenzisi bebhizinisi lokukhokha lansuku zonke nele-elekthronikhi elenziwa nge-elekthronikhi likwazi ukubona imisebenzi eminingi efanelekile, kufaka phakathi imali ekhokhwa ngemali ekhokhwa nguhulumeni, ukukhokhwa kwemali efakwayo ngomakhalekhukhwini, ukuthenga kwamathikithi e-movie, ukuthengwa kwe-lottery, ukusebenza kwamathikithi okuthenga, ukuthengwa kwamathikithi wesitimela, ukuphrinta isigqebhezana, inkokhelo yokuthenga yomshuwalense, ukudluliselwa kwamakhadi asebhange, ukukhokha ikhadi lesikweletu, ibhalansi yekhadi lasebhange. ukubuza nokunye.
Izinsizakalo zokukhokha ezisebenza ngokuzimele zivumela ukwahlukanisa phakathi kwabaqhudelanayo futhi ziletha izinzuzo zombili kumthengi kanye nomhlinzeki wesevisi ngokuya ngokuguquguquka, ukulawula nokunciphisa isikhathi. Ngaphezu kwalokho, yehlisa izindleko ngezinsizakusebenza zabantu, okwenza inqubo ibe lula futhi ikwazi ukuzimela kumsebenzisi.
Amakhasimende manje afuna izici ezisebenzayo ngenkathi enza isinqumo sokuthenga, okuyinto ekhuthaza izinkampani ukuthi zamukele ubuchwepheshe be-kiosk. Lokhu, kuzothuthukisa ukukhula kwemakethe yama-kiosks ngaphezulu komkhathi ocatshangelwe.
Umkhakha Wezokuxhumana weXiangLong unikeza izinhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, engangeneki kwamanzi, evimbela ukungonakaliswa ikhiphedi yekhiphedis. Zonke izinkinobho zenziwe ngokuqina insimbi engagqwali or i-zinc alloy. Ingaphezulu le-inkinobho, isakhiwo kanye nephethini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngeminye imininingwane, wamukelekile ukusibuza!
Okwedlule: Amathiphu wokusebenzisa Izingcingo Zomphakathi kanye nama-Payware
Okulandelayo: 4x4 insimbi engagqwali ikhiphedi yensimbi efakwe emishinini ethengisa i-Uniqlo